महिलालाई डरपोक मान्ने पुरुष पनि यी कुराबाट अत्यन्तै डराउँछन् ! « News24 : Premium News Channel
महिलालाई डरपोक मान्ने पुरुष पनि यी कुराबाट अत्यन्तै डराउँछन् !
महिलालाई डरपोक भन्ने पुरुषहरु पनि कम डरपोक हुँदैनन्, फरक यति हो कि उनीहरु महिलाका अगाडि पर्दा सकेसम्म घर लुकाउन खोज्छन् । त्यस्ता धेरै कुरा हुन्छन्, जसले पुरुषको मनमा डर उत्पन्न गराएका हुन्छन् तर समस्या के कुरा गर्न सक्दैनन् र त्यसबाट मुक्त पनि हुन सक्दैनन् । हेरौँ पुरुषका वास्तविक डरहरु केके हुन्छन् ।
मोटाउने डर – महिलाहरु आफ्नो फिगरलाई लिएर बढी नै चिन्तित हुने पुरुषहरुको दाबी रहँदै आउको छ । म मोटी त देखिएकी छैन नि ? कस्ती देखिन्छु भन
त ? भनेर युवती एवं महिलाहरु बारम्बार प्रश्न महिलामाथि अनेकथरी टिप्पणी गर्छन् । जबकि यस्तो टिप्पणी गर्ने पुरुष स्वयंलाई फिगर बिग्रने हो कि भन्ने डर हुन्छ । भुँडी लाग्ने हो कि, बढी मोटो भइने हो कि भन्ने डर पुरुषको मनमा पनि सदैव रहन्छ । यदि मोटाएको थाहा भएमा उनीहरु कम डाइट गर्ने वा व्यायाम गर्न थालिहाल्छन् ।
बुढो देखिने र आउटफिटको डर – पुरुषलाई पनि आफ्नो उमेरभन्दा बूढो देखिन्छु कि क्या हो ? भन्ने चिन्ता हुन्छ । कुनै किशोरले अञ्जानमै अंकल भनिदियो भने उनीहरु दिनभर सोचमग्न हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु पनि लुकि–छिपी भएपनि थ्रेडिङ, फेसियलआदि गराउँछन् । त्यस्तै, बाहिर कतै सपिङ, घुम्न वा पार्टीमा जान परेमा पुरुष पनि आफ्नो आउटफिट लुक्सप्रति सोचमग्न हुन्छन् । कुनै दिन सहकर्मी महिलाले आफ्नो पोसाकको बारेमा राम्रो देखिएन भनिन्, भने उनीहरु त्यतिबेलासम्म शान्त रहँदैनन् जबसम्म फेरी त्यही बिषयमा प्रशंसा प्राप्त गदैनन् ।
सेक्सको डर – विवाहको पहिलो रात होस् वा थुप्रै बर्षपछि, प्रायः पुरुषलाइई घर रहन्छ कि कतै आफू श्रीमतीसँग पछि परिने पो हो कि, कमजोरी देखिए पार्टनरले केही भन्ने पो हो कि जस्ता कुरामा सदैव पुरुष जागरुक रहन्छन् । पार्टनरका अगाडि आफ्र परफेक्ट देखिन चाहन्छन् ।
जिम्मेवारीको डर – समान्यतया पुरुषभन्दा महिलाले राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् भनिन्छ । पुरुषहरु पनि महिलाजस्तै पारिवारिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चाहान्छन्, ताकि भविष्यमा आफ्ना सन्तान वा अरु कसैले आफूलाई कमजोर वा अयोग्य नभनिदिऊन् ।
पत्नीले बढी प्रगति गर्लिन् कि भन्ने डर – कामकाजी श्रीमतीले यो कुरा ख्याल राख्नु आवश्यक छ कि श्रीमान् प्रगति देखेर खुशी त हुन्छन् तर भित्रभित्रै त्रसित पनि रहन्छन् । प्राय, पुरुषको मनमा श्रीमतीले आफूलेभन्दा धेरै प्रगति गरेर आफूलाई छायामा पार्ने हुन् कि भन्ने डर हुन्छ ।
जोइटिङग्रे भन्लान् कि भन्ने डर – पुरुषहरु आफूलाई समाज, साथीभाइ तथा परिवारले जोइटिङ्ग्रे भनेको पटक्कै मन पराउँदैनन् । आफू जोइटिङ्ग्रे नै भएपनि अरुका अगाडि श्रीमतीलाई हप्काएजस्तो गरी आफूलाई विशिष्ट साबित गर्न खोज्छन् ।
छवि गुम्ने डर – पार्टी वा कुनै समारोह आदिमा आफ्नी श्रीमतीको सबैले प्रसंशा गरिदेलान् र आफे छवि खराब होला भन्ने डर उनीहरुमा रहन्छ । पुरुषको मनमा पनि सदैव आफूलाई अरुले के अन्लान् भन्ने डर हुन्छ ।